Asa ho an'ny Pakistaney any Emirà Arabo Mitambatra amin'ny Dubai sy Abu Dhabi!
Asa ho an'ny Pakistaney any UAE ⭐⭐⭐⭐⭐
Izahay dia recruitment - asa azo any Dubai sy Abu Dhabi! 🥇
Mpikaroka momba ny fitondrana ao Dubai ho an'ny orinasa 🥇
Desambra 17, 2017
navoakan'ny Dubai City Company at Desambra 13, 2017
Asa ho an'ny Pakistane any UAE
Manomboka amin'ny Company Recruitment tsara indrindra ao Dubai
Asa ho an'ny Pakistani any UAE ny orinasa anay dia hafa. Betsaka isika tsara lavitra noho ireo orinasa mpitari-dàlana hafa any UAE. Ankoatra izany, ny orinasantsika dia miorina ao amin'ny 2016 ary nametraka serivisy mahafinaritra ao amin'ny United Arab Emirates. Ny mpiasan'ny orinasam-pifandraisana no nandia mpanolotsaina mpandraharaha any Dubai ary ny HR ireo manam-pahaizana ao amin'ny firenena GCC.
Ny Company City ao Dubai dia iray amin'ireo ny masoivoho Dubai maniry haingana indrindra any Moyen Orient, Azia ary Canada. Na dia mety ho marina aza izany, ny sasany amin'ireo Mpampiasa asa any Azia dia mampiasa ny orinasantsika any UAE. Over 80% mpihaza asa lasa kandidà mahomby ao Dubai.
Ny fananganana an'i Asia Recruit dia mifanaraka amin'ny fangatahana eo amin'ny tsena mifaninana. Company Company fanomezana vahaolana amin'ny mpiasa ho an'ny mpanjifa malaza maro. Ary manome tombontsoa sy fitomboana tombontsoa ho an'ny kandidà maro. Ny orinasam-pitenenanay amin'ny ankapobeny dia ampahany amin'ireo vondrona orinasa manokana any Dubai City. Raha jerena ireo teboka ireo dia ny Moyen Orient sy Azia Recruitment raharaham-barotra nitarika tetikasa mahagaga tao UAE. Manampy tokoa ireo mpilatsaka an-tsitrapo maro karazana any Dubai sy Abou Dhabi.
Noho izany, ny tanjon'ny fikarokarohana momba ny asa dia natao manokana. Tsotra fotsiny manome fanampiana amin'ny asa fitadiavana any Dubai amin'ny indiana. Amin'ireny toe-javatra ireny, ny orinasanay dia manome tokana ny asa ary ny orinasan'i Dubai. Fahafahana ho an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo manan-talenta ao UAE miandry ireo mitady asa any Pakistan any Afovoany Atsinanana.
Alefaso ny resadresaka ho an'i Dubai eto ambany!
Jobs in Dubai for Pakistani!
Miandry ny CV ianareo
Dubai dia mahatalanjona sy mahagaga!
Amin'ny ankapobeny, ny orinasan'ny fandraisam-pahaizana ao Dubai City. Nanampy ireo mpikaroka momba ny asa ho an'ny mpikaroka ho an'ny asa Toeram-piofanana fiara fitaterana any Dubai. Saingy araka ny nomarihina dia manangona isika mpikaroka iraisam-pirenena avy any Inde izay ahitana ny mpikaroka asa asiana. Ny mpitady asa Pakistaney dia tongasoa eto UAE ary isika azo antoka fa tsy voafetra ihany amin'ny UAE. Mandritra izany fotoana izany, mitady kandida avy any Qatar, Shina isika ary avy eo mpanatanteraka avy any Hong Kong ihany koa. Ary koa mpikatsaka asa avy any Afrika Atsimo. Miaraka amin'i Etazonia sy Singapore. Fanampin'izay, manampy ny expats avy any Indonezia izahay. Ary Malaysia Ny mpihaza asa dia tsy mahazo mandray azy any Dubai.
Dubai jobs miaraka amin'ny visa dia tsy natao ho an'ny kandidà ao an-toerana ihany. Raha toa ianao Avy any Pakistana ianao afaka mahazo tolotra asa avy amin'ny orinasa Dubai City Company. Mikasika ny fitadiavana asa any Dubai. Ekipa mpikaroka ao amin'ny United Arab Emirates. Ary mametraka ny mpiasa any Pakistan any amin 'ny orinasa City ao Dubai. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, dia manantena ny handroso isika mametraka anao amin'ny fotoana vaovao any Dubai.
Dubai no toerana tsara indrindra amin'ny asa iraisam-pirenena. Somary ambany ny tahan'ireo tsy an'asa any Dubai. Noho izany, tokony hiezaka ny hampiasa ny serivisinay ianao ary hamindra any Pakistan. Rehefa ampiharina amin'ny anay ianao orinasa afaka ahazoanao asa mora any Afovoany Atsinanana. Ny fifandraisana amin'ny tompon'andraikitry ny HR sy ny mpiandraikitra ny Recraction dia fanalahidy hahitana asa any amin'ny faritra. Aza lany andro ary ampidiro indray ankehitriny.
Isika no orinasam-pitaterana haingana indrindra any UAE
Raha tsiahivina dia isan'ireo orinasa tsara indrindra any UAE isika. Izahay koa Ny masoivoho mpitrandraka nahazo alalana tanteraka any Dubai ny ekipanay dia manana traikefa manokana any UAE. Be karoka avy amin'ny fikarohana an'i Pakistan Gulf Jobs. Miaraka amin'ny fitadiavana asa manokana ireo olona Pakistaney tonga hitady asa any UAE. Izany dia ao an-tsaina, ny orinasanay manandrana manondrana olona. Avy any Pakistan ka hatrany ampitan-dranomasina torolàlana ho an'ny mpitatitra entana any Dubai.
Mba hametrahana izany fomba hafa izany, ny sampandraharahan'ny fandraharahana ao Dubai City Company. Manolotra karazana asa fanampiana amin'ny mpikaroka asa avy any Pakistana. Miara-miasa amin'ny orinasa 6,000 HR miserana any Dubai sy Abu Dhabi izahay. Ho an'ny serivisy fametrahana maharitra any Dubai. Zava-dehibe ny fahatsapanay Fametrahana asa dia misy mpiasan'ny fifanarahana. Miaraka amin'ny mpiasa tsy maharitra mandritra ny fotoana fohy ho an'ny orinasam-pifandraisana eto Dubai sy Abu Dhabi. Ankoatr'izay, izahay dia miasa amin'ny tsenan'ny mpiasa iraisam-pirenena sy ny tsenan'ny taxi.
Avy amin'ireo tolotra tokana nomen'ny orinasa anay. miainga avy any Azia kely ho any Emirates orinasa. Hatramin'ny fikambanana lehibe maro an'isa ao amin'ny firenena GCC. Toy ny Bahrain mazava ho azy miaraka amin'ny Qatar mahavariana. ny Orinasa Dubai mpirotsaka ho an'ny indostria isan-karazany. Toy ny solika sy gazy ao Dubai sy Abou Dhabi. Mety ho eo an-tananao ny Asa ho an'ny Pakistaney ao UAE.
Na izany aza dia mety ny asa ara-teknolojia marina momba ny teknolojia any Abu Dhabi. Ho an'i Pakistana ao UAE dia tena tsara malaza ho mpihaza any ivelany. Amin'ny lafiny iray, ny sehatry ny banky sy ny ara-bola ho an'i Pakistan. Eo koa ireo mpanatanteraka ambony ao UAE. Mandritra izany fotoana izany, Ny asa momba ny fahasalamana any Dubai dia sarotra ny mahita. Saingy mbola azo atao izany raha maharitra ela ny fitadiavana asa. Tsy resaka fanamboarana fotoana fototra fotsiny ihany. Miaraka amin'ny fananganana sy lozika sy fitaterana fitaterana any Emirates.
Ny porofon'ny ankamaroan'ireo kandidà avy ao Pakistan. Izany no mora indrindra hita ao amin'ny serivisy finday. Azonao atao ohatra ny mampiasa Dubai WhatsApp Groups. Maro ireo toerana ahafahan'ireo mpiasa ao Pakistan ao Dubai.
Amin'ny lafiny ratsy dia tsy maintsy mahatadidy. Be izany kandidà maro kokoa manonofy momba an'i Dubai. Ireo andro ireo dia mandeha any Emirates miaraka amin'ny sehatra manokana kokoa amin'ny sehatry ny Engineering. Teknolojia fampahalalam-baovao (IT) asa ho an'i Dubai ho an'ny Pakistaney misy raha toa ka misoratra anarana amin'ny orinasanay. Miaraka amin'izany ao an-tsaina amin'ny lafiny tsara. Ianao dia afaka hahazo tombony tena tsara amin'ny Sales & Marketing Toeran'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Fitantanam-bola sy kaonty miaraka amin'ny asa amin'ny Bank HR & Administration any Emirates. Toy izany koa, raha avy any Pakistan ianao hitady anao Top Management & Corporate stratégement.
Jobs ao Dubai ho an'ny Pakistaney
Miaraka amin'ny fahaiza-manao tambajotra be dia be momba ny fifandraisana. Pakistan mitady mpikaroka amin'ny orinasam-pifandraisana Dubai. Amin'ny lafiny iray, miaraka amin'ny antsika traikefa arak'asa amin'ny tsena Afovoany Atsinanana. Amin'ny lafiny iray, napetrak'ireo mpanatanteraka Pakistaney any UAE izahay. Maro amin'ireo mpanolo-tsaina za-draharaha mikaroka momba ny asa any Dubai ho an'ny Pakistani. Ny asa an-tserasera ao Dubai dia tsy mora hita. Raha mipetraka any ivelany ianao. Saingy ny teboka iray lehibe iray dia manolo-tena ho an'ny mpihaza asa asiana isika. Ny manome fotsiny ny ambaratonga ambony asa momba ny fihazana asa mifototra amin'ny fomba mahazatra. Ho an'ny mpanjifa iraisam-pirenena roa. Iza no miorina ao amin'ny Afovoany Atsinanana sy Azia ho an'ny mpampiasa sy ny mpikaroka asa.
Mampiasa ireo orinasam-piantsonanay Pakistana mahazo tolotra asa vaovao. Tsotra fotsiny fikarohana ary mifandray amin'ny orinasa mpandraharaha. Amin'ireny toe-javatra ireny, ny mpanolontsaintsika no mitantana asa. Ao amin'ny fandaharam-pampianarana tsirairay mifanaraka amin'ny kandidà tsirairay ho an'ny tolotra asa. Ao amin'ny fanadihadiana farany ny vokatr'ireo tolotra finday ho an'ny serivisy avy any Azia mankany Dubai. Izany dia mamela antsika hanome ny mpanjifantsika asa mahagaga ao Dubai. Nahavita ny zavatra rehetra nodinihina izahay rehefa namorona ny mombamomba ny tranokalanay ny mpikaroka momba ny asa. Alefaso azafady ny tohiny Dubai City dia manana dingana mihalehibe.
Mametraka ny kandidà Pakistane ao Dubai City
Araka ny nomarihina dia manome vola ho an'ny kandidà tsirairay izahay. Iza no vonona handoa antsika amin'ny fanompoana ary tsy mahita asa. Ny serivisy lehibe amin'ny orinasa dia mamonjy fotoana fotsiny. Ho an'ireo mpifaninana sy mpanjifa. Mametraka azy ireo avy any Pakistan mankany Dubai. Ny fomba tsotra dia tena tsotra satria mandidy mpitantana avy any Pakistan mankany Dubai. Mora sy feno kokoa noho ny 2009. Amin'ny fahazoana ny fahatakarana ny filan'ny mpanjifa Afovoany Atsinanana. ary kandidà avy any ivelany any ivelany izay mitady asa any UAE. Izany no ataontsika tsara indrindra any Abou Dhabi.
Noho ireo teboka ireo, ny fahaiza-manaon'ny tompon'andraikitra sy ny tombontsoa sy ny traikefa manerana ny Afovoany Atsinanana. Hanome antoka antsika izany mamerina ny talenta tsara indrindra ho an'ny tanànan'i Dubai orinasa. Miasa ao anatin'ny sehatry ny varotra sy ny varotra any UAE isika. Manampy ireo orinasa IT avy any Katar ihany koa ny mametraka ny kandidà. Miara-miasa amin'ny orinasa vitsivitsy any Arabia Saodita izahay. Any aoriana, Manangana olona ao Dubai izahay.
Asa ho an'ny Pakistaney any Emirà Arabo - Ny orinasanay dia afaka manampy anao hahazo asa avy any Pakistan !. Ampidiro CV ankehitriny! Ny tanànan'ny asa any Dubai!
Ny asa ho an'ny Pakistane any Emirà Arabo Mitambatra dia azonao atao!
Ny tsipika ambany dia Fivarotana orinasa any Dubai avy ao Pakistan. Manampy ireo mpanjifa ao anatin'ny orinasa mandresy any Dubai izahay izao. Izahay dia tompon'andraikitra amin'ny orinasa Pakistan. Ary mitady talenta foana avy any Pakistan. Mihatsara ireo kandidà vaovao ataontsika Karohy amin'ny alalan'ny asa tsara kokoa toy ny WhatsApp.! Ho an'ny mpanatanteraka avy any UAE. Tsy misy na aiza na aiza misy anao.
Na aiza na aiza monina amin'izao fotoana izao. Tena betsaka asa ho an'ny Indiana olona nitady asa. Ankoatra izany, ny Afrikana Tatsimo ary na ny Amerikana misy expats ihany aza dia afaka mahita asa. Ka tsy misy fialan-tsiny tsara. Saika misy olona afaka napetraka ao Dubai. Ny olona vaovao dia azo apetraka ao Emirates, na inona na inona ambara aminao anao. Dubai City Company azo antoka fa eto hametraka mpiasa vaovao any UAE. Amin'ny ankapobeny, marobe amin'ireo mpanjifantsika mijery ireo orinasa mpanefy ireo. Careerjet ao amin'ny tranokalan'i Dubai ary Gulf monster company Tena sarobidy tokoa ny mihatra amin'ny CV anao.
Torolàlana ho an'ny mpihaza karatra ao Pakistan
Ny asa any Dubai ho an'ny Pakistani dia sarotra ny mahita. Ka ny olona Pakistaney dia tia mampiasa ny orinasanay. Manome lanja ny orinasa any Dubai Mpiasa aziatika ary tsy misy olana ny visa. Namorona izahay Dubai Guide sy fampahalalana ho an'ireo mpihaza asa any Azia. Ireo mpampiasa mpikarakara karama dia afaka mampiasa ny torolàlana ho anay eto Dubai. Ny asa ho an'ny Pakistani any UAE dia mety ho hita miaraka aminay.
Etsy an-danin'izany, azonao atao ampiasao ny tolotra finday finday. Betsaka ny mpanety vaovao tonga any Dubai. Tsy voatery hahita asa, ny sasany amin'ireo tonga eto Dubai ny exposse. Tsy nahita asa tany UAE. Izany no antony nahatonga ny orinasantsika hamorona torolàlana sy vaovao any Dubai. Mba hanampiana ireo mpikaroka amin'ny asa dia hahita asa alohan'ny fitetezana any Emirates.
Misy fitarihana feno ho any Dubai ary hahita asa. Ny mpitady asa vaovao dia mikendry mafy ny hahita asa. Ary eto ny Company City Dubai dia eto mba hanampiana izay expatriate izay mitady asa. Ny vondrona WhatsApp Dubai dia tena miasa ho an'ny rehetra. Fomba iray tsara no napetraka amin'ity Emirates United Arab.
Asa vaovao any amin'ny firenena Golfa
Ny mpiasa Pakistane dia afaka mahita asa koa amin'ny maha-mpanatanteraka ao amin'ny hotely iray ao Dubai. Ka ianao toy ny expat dia afaka mitady asa any amin'ny sehatra maromaro. Fa ny tsara indrindra dia TCS asa orinasa. Etsy an-danin'izany, tsy iasan'ny Dubai ihany no manakarama azy, dia misy firenena maro hafa maniry ny hametraka ireo mpikaroka asa. Maromaro ny resaka ireo orinasa any Arabia Saodita mandray mpikaroka asa.
Ny asa any amin'ny firenena any amin'ny Golfa dia tena tsara karama. Ohatra, bola be mpividy banky any Dubai. Manana fahafahana maro ho an'ny olona vaovao tsy ao Golfa ihany. Misy ihany koa orinasa iraisam-pirenena any Eoropa sy Etazonia mipetraka ao Dubai City. Iray amin'ireo lehibe indrindra Ny orinasa miasa ao Dubai dia Google. Mazava ho azy fa maro ireo firenena hafa izay manakarama vahaolana vaovao.
Ny fomba haingana indrindra hahazoana asa any Emiratsika ho fresher. Amin'ny ankapobeny dia ny fananana MBA fanabeazana hanomboka asa. Raha ny tokony ho izy, ny fomba tsara dia ny fanabeazana misy eo an-toerana. Ny tsara indrindra dia ny avy any Dubai na ny Oniversite Abu Dhabi. Ohatra mety mahazo asa any Dubai Mall ianao. Miasa tokoa ho an'ireo vahiny mpila ravinahitra any ivelany.
Asa hanomboka amin'ny Pakistaney any Dubai
Iray amin'ny fomba hendry indrindra hanombohana ny asa any Dubai. Amin'ny ankapobeny dia ny hitady asa any Dubai. Amin'izao fotoana izao dia betsaka ny mpiasa avy any Afrika Atsimo ao Dubai. Mba hanomboka hitady asa any Dubai dia manoro hevitra mafy izahay mba handehanana any anaty resadresaka. Ny fivoahana miaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny resadresaka amin'ny mpitantana ny fandraisana mpiasa dia toa hevitra tsara.
Ohatra, ny fandaniana dia afaka Hitady asa ho mpampianatra any Dubai. Ny fanomezana an'io fanazavana io dia tokony ho fantatrao ny fomba hitantanana ny fikarohana. Indrindra indrindra amin'ny iray amin'ny toerana tsara indrindra ho an'ny mpikaroka. Ary ity toerana ity dia ny Emirà Arabo Mitambatra. Noho izany, amin'ny famaranana fohy Asa ho an'ny Pakistane any UAE mivelatra malalaka aminao. Asa ho an'ny Pakistani any Dubai City. Amin'ny ankapobeny, isika hiroborobo ao Dubai ho an'ny tsena Afovoany Atsinanana. Ampidiro ny orinasanay CV ary miandry ny tolotra momba ny asa.
Miasa ho an'ny Jobs ao Dubai izahay ankehitriny!
Te-hahita a Job in Dubai? Na dia marina aza izany dia afaka manampy anao hanomboka vaovao asa ao amin'ny UAE amin'ny 2018!
Afeno ny famerenana Ho any Amin'ny Tanàna Manan-dampana Lavitra Indrindra! - Dubai City
Orinasa Dubai ankehitriny fanomezana torolàlana tsara ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Dubai mitsotra. Noho izany, amin'izao fahatsapana izao, afaka mahazo torolalana, toro-hevitra sy asa any Emirà Arabo mitambatra amin'ny fiteninao manokana ianao.